Nepal Dayari | क ठै!!दुइओटी विवाह गरेका दाई आज एक्लै, ४ महिनाकी छोरीको बि चल्ली, हेर्नुहोस भिडियो
क ठै!!दुइओटी विवाह गरेका दाई आज एक्लै, ४ महिनाकी छोरीको बि चल्ली, हेर्नुहोस भिडियो
चैत्र १५, २०७८ मंगलबार ११९ पटक हेरिएको
चार महिनाको बच्चा जसलाई उसकी आमाले स””दाको लागि छो डेर गइन्। यदि १ लाख भएको भए उनी बाँ “”च्ने रहिछिन्। यदि १ लाख त्यो बेला भएको भए अहिले ४ महिनाको बच्चा सँगै हुन्थिन्।
श्रीमान को नाम रहेको छ नेत्र प्रसाद को इंडिया मा थिए यता घरमा श्रीमती बि””रामी भएकी थिइन्। मलाई खबर आए पछि म घर आए । घर आउँदा मैले १ लाख रुपैयाँ पनि ल्याउन सकिन। या आएर अरु संग माग्दा कसैलेपनि दिन मानेनन्। भित्र भित्रै घा “”उ बढ्न थालेछ।
बिस्तारै कसैले पनि पैसा दिन नमान्दा र घाउ पनि बढ्दै जाँदा उनको मृ “” त्यु भएको सुनाउँछन्। ३ चार महिनाकी बच्चा को बि “”जोग भएको छ ।